राष्ट्र बैंकले काविल नेतृत्व खोजेको छ
अर्थ नीति विचार
भागवत भट्टराई काठमाडौं, ३० फागुन
आगामी ५ चैतमा नेपाल राष्ट्र बैंकका १६औँ गभर्नरको कार्यवधि सकिँदै छ । १७औँ गभर्नरका लागि राष्ट्र बैंकभित्र र राष्ट्र बैंकबाहिरबाट केही व्यक्ति लागिपरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुन कस्तो योग्यता चाहिएला ? अहिलेको आवश्‍यकता कस्तो हो ? लगायतका विषयमा कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाको शिलापत्रकर्मी भागवत भट्टराईसँगको कुराकानीमा आधारित विचार प्रस्तुत छ ।
नेपालको बैंकिङ व्यवसाय निकै ठूलो भइसकेको छ । अहिले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन ३४ सय अर्ब रुपैयाँको हो । तर, वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्ति मात्र ३८ सय अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकमा जनताको डिपोजlट वा जनताले जम्मा गरेको पैसा ३६ सय अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
यस्तो संस्थामा सक्षम मात्र होइन, काविल नै चाहिन्छ । त्यो डिपोजिटरलाई सुरक्षित तुल्याउँदै अत्यधिक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्छ । नेतृत्व कस्तो आउला फरक पाटो हो । अहिलेको तथ्याङ्कले काविल नेतृत्व खोजिरहेको छ । देशको जीडीपीभन्दा ठूलो बैंकिङ इन्ड्रष्टी भइरहेको अवस्थामा यस विषयलाई मनन् गर्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सदृढ किसिमले परिचालन गर्न सक्ने ओभर बैंकिङ क्षेत्र र बैंकिङ प्रविधि बुझेको चाहिन्छ ।
थोरै पनि बैंकिङ क्षेत्र तलमाथि हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै धक्का पुग्छ । यसैले पनि काविल नेतृत्व आवश्‍यक परेको हो । जनताको विश्‍वास जित्न सक्ने, रकम सुरक्षित परिचालन गर्न सक्ने निर्णय लिन सक्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकको आउने नेतृत्वका लागि अर्को पनि चुनौतीको विषय हो । अहिले कोरोना भाइरसलगायतका अन्य विभिन्न कारणले पनि गैरआर्थिक क्रियाकलापले अर्थव्यवस्थालाई नराम्ररी लपेटेको छ । यसलाई उद्धार गर्न सक्ने क्षमता भएको नेतृत्व राष्ट्र बैंकमा चाहिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नरले चेन अफ कमान्ड सम्हाल्न सक्ने क्षमता भएको हुनुपर्छ । गभर्नरले भनेको कुरा डेपुटी गभर्नरले गर्न नसक्ने, कार्यकारी निर्देशकले नटेर्ने भयो भने अर्थ हुँदैन । सदृढ चेन अफ कमान्ड कायम गर्न सक्ने नेतृत्व अहिलेको आवश्‍यकता हो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ३०, २०७६, १२:०५:००